တရုတ်ထံမှစိတ်ကြိုက်အကောင်းဆုံး 4D33 Piston မစ်ဆူဘီရှီပေးသွင်းထုတ်လုပ်သူ | 1D;ONE
1D; တရုတ် မှစ. စိတ်ကြိုက်အကောင်းဆုံး 4D33 Piston မစ်ဆူဘီရှီပေးသွင်းထုတ်လုပ်သူ, Facility& လက်မှတ်များ: တပ်ဆင်ထားတဲ့ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် Bosch ရဲ့ / Siemens စက်တွေ
ME013312 ME016896 များအတွက် Fuso Truck ကားမစ်ဆူဘီရှီ 4D33 ဒီဇယ်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများပစ္စတင် 108mm alfin
ပထမဦးဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်, ဖောက်သည်: ကျနော်တို့ 1D မူအရလိုက်နာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဂျပန်နည်းပညာနှင့်ထိုင်ဝမ်မူလအစ၌ရှိကြ၏။
4D33 အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုအများကြီးဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုသည်။ ကျနော်တို့ hte အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေမယ့်အကြှနျုပျတို့သညျလိုအပျအတိအကျဘာကိုဆက်ကပ်။
1D ကားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း CO ။ , LTD မှ။ အကောင်းဆုံး 4D33 piston MITSUBISHI ပေးသွင်း
oe NO .: ME013312 ME012897 ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: 1D
မူလအစရာ: ကွမ်ကျိုး, တရုတ် (ပြည်မကြီး), မော်ဒယ်အရေအတွက်: ME013312 ME012897
မော်တော်ကားမော်ဒယ်: 4D33 DIA: 108
အမျိုးအစား: ပြွန်ကြပ် Lenght: 112,2
အာမခံ:3လ လက်စွပ်အရွယ်အစား: +43 + 2
ပစ္စည်း: ပစ္စည်း pin: 34 * 84
ယခုနှစ် 2012 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ငါတို့ 1D ကားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း CO ။ , LTD မှ။ တစ်ဦး Proprietorship ခိုင်မြဲသောနှင့်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအရည်အသွေးကိုအင်ဂျင် gasket များ၏စာရင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်သည်ဖြစ်ကြသည်။ တရုတ်မှာအခြေခံပြီး; gusngzhou ;, ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ချက်ချကြသည်နှင့် Ultra-ခေတ်မီစက်ယန္တရားတွေနဲ့ကိုယျ့ကိုယျကိုလက်နက်ပါပွီ။ ဆရာ Yuguangwei ၏ပဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်၌, ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မှတ်ခြင်းနှင့်ထူးဆန်းသောအနေအထားအောင်မြင်ပါပြီ။